VS Kodhi yemabhurawuza. Microsoft ichiri kumashure kwevagadziri | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | 21/10/2021 08:54 | General, Noticias
Mumakore gumi nerimwechete se blogger ndakave neangu muzana yezvikanganiso uye kubudirira. Ini ndakasiya matekinoroji uye kugovera izvo zviripo iye zvino kupfuura nakare kose nhasi, asi, ini ndaive chaipo pakubheja pane esevhisi masevhisi uye zvishandiso senge iyo Chromebook seyatsva paradigm yeindasitiri.
Mukushushikana kwayo nekusarasa hutungamiriri pane desktop, Microsoft haina kuziva kuti Apple neGoogle zvakachinja mitemo yemutambo. Iyo komputa yakanga isisiri iyo yepakati yekushandira chiitiko, kana kutengeswa kwemarezinesi bhizinesi modhi. Cloud services, yakabhadharwa nekushambadzira kana kunyorera, uye inokwanisika kubva pahwendefa kana foni, yakawedzera kukurumbira.
Microsoft yakaita chete chinhu chine musoro. Yakagadzira mashandiro ehurongwa hwekushanda hwevakwikwidzi vayo, yakaendesa akawanda mafomu ayo akakurumbira kugore uye, yaive mushure mekukundwa kwevagadziri vakazvimirira kuti yakabudirira nepuratifomu nyowani. Imwe yesarudzo dzakakurumbira yaive yekuburitsa yakavandudzwa nharaunda yekuvandudza pasi peyakavhurika sosi rezinesi. Yainzi VS Code.
1 VS Kodhi yemabhurawuza
1.1 VS Code maficha emabhurawuza
VS Kodhi yemabhurawuza
Kuenderera uchidzika nenzira iyoyo ichangoburitswa uvhezheni yakajeka ye VS Code iyo inomhanya zvizere mubrowser. Iwe unongofanirwa kugadzira dhairekitori pane chishandiso chauri kuwana kuti uchengetedze basa rako.
Asi, pane kubata. Inongoshanda chete zvizere neChromium-based browser (Edge, Google Chrome, Brave, Opera, Vivaldi…). MuFirefox uchafanirwa kugadzirisa nekushanda nekuvhura mafaera ega kana kubatanidza kune yekunze nzvimbo.
Izvi zvinodaro Kuti uwane mudziyo wemushandisi, bhurawuza rinofanirwa kushandisa iyo faira system kuwana API.
Ini zvakare ndanga ndisingakwanise kuwana sarudzo yekududzira iyo yekushandisa interface mumutauro wedu.
VS Code maficha emabhurawuza
Chii chaunogona kuita nenzvimbo yakabatanidzwa yekuvandudza iyo isingade kuiswa? Zvinoenderana neMicrosoft:
Kugadzira nekugadzirisa mu browser yeakanakisa mafaera pane chishandiso chemushandisi.
Wongorora uchishandisa Markdown notation.
Chirongwa uchishandisa yakaderera-zviwanikwa michina kana nhare mbozha.
Kubvumirana pakati pemidziyo.
Kujekeswa. Mune ino kesi Hatisi kutaura nezve sevhisi sevhisi senge Microsoft 365. Ichi chishandiso chinomhanya chose mubrowser. Nekudaro ine zviyero zvine chekuita neshanduro yedesktop.
Icho chakakosha kwazvo ndechekuti haugone kumhanyisa mapurogiramu kubva kuchiteshi kana kumhanyisa iyo debugger sezvo pasina nzira iyo iyo bhurawuza ine rutsigiro rwemitauro mitauro.
Ruvara kodhi kusiyanisa uye Autocompletion inowanikwa kune mazhinji epurogiramu mitauro.
Panyaya yemitauro yakadai seJSON, HTML, CSS uye CHIDZIDZA, mashandiro acho anenge akafanana neayo edesktop vhezheni.
Kunyangwe runyorwa rwekuwedzeredza rwakafanana nedesktop, haasi ese aripo. Izvo zvinoda kuendesa kodhi muNode.js, iyo inofambidzana neakasarudzika mamodule eiyo inoshanda sisitimu, kana iyo inotangisa yemuno yakaiswa zvirongwa, ichaiswa mucherechedzo seisina kubvumidzwa. Iwo ayo anoshanda ndeekugadzirisa kweanoshandisa mushandisi, senge madingindira, mamepu ekiyi uye snippets kodhi.
Zviripachena kuti chinangwa cheMirosoft ndechekuti mapurogiramu vashandise masevhisi. Saka VS Code yeWebhu inounza zvakabatanidzwa GitHub zvinyorwa, kodhi nzvimbo, uye dhonza chikumbiro chekuwedzera. Izvi zvinoita kuti zvikwanise kugadzirisa nekukurumidza, kuongorora hukama hweveruzhinji, uye kuramba uchishanda nekopi yemuno kana kodhi nzvimbo yeGitHub kuumbiridza, kumhanya, uye kuyedza shanduko dzako.
Ini ndinodzokorora zvandinogara ndichitaura kana ini ndataura pamusoro pechigadzirwa cheMicrosoft. Mune mamiriro azvino indasitiri, zviri mukuda kwako kuburitsa yakavhurika sosi zvigadzirwa zvine marezinesi, zviite kuti zvienderane neLinux, uye zvipe iwo mahara. Kana yamira kukukodzera, ivo vanozonyangarika. Zvichakadaro, kana vakatishumira, zvakanakisa kutora mukana navo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » VS Kodhi yemabhurawuza. Microsoft ichiri kumashure kwevagadziri
Kdenlive inounza yakagadziridzwa vhezheni kune macOS. Iyo KDE mupepeti ikozvino yambuka-chikuva